Waa kuma Xildhibaanka ugu Da’da yar Baarlamaanka Cusub ee Maamulka Hirshabelle +Sawirro | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Waa kuma Xildhibaanka ugu Da’da yar Baarlamaanka Cusub ee Maamulka Hirshabelle +Sawirro
Magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeelaha Dhaxe waxaa dhawaan lagu dhisay Baarlamaanka uu yeelanayo Maamulka Hirshabelle ee loo dhisay gobolada Hiiraan iyo Shabeelaha Dhaxe.
Baarlamaanka Maamulka Hirshabelle ayaa ka kooban 89-xubnood , waxaana Baarlamaanka cusub ee maamulka Hirshabelle nasiib u yeeshay in ay kamid noqdaan Dhalinyaro howlkar ah oo kasoo jeeda labada gobol ee Hiiraan iyo Shabeelaha Dhaxe.
Xildhibaan Maxamed Cabdalle Cali (Deeqow Carab) oo kamid ah Baarlamaanka maamulka Hirshabelle ayaa noqday Xildhibaanka ugu da’da yar ee Baarlamaanka Hirshabelle , waxa uuna Xildhibaankan da’diisa ay tahay 27-sano.
Xildhibaan Deeqow Carab ayaa kamid ahaa dhalinyarada magaalada Jowhar gaar ahaan dhlinyarada dhinaca Ciyaaraha, waxa uuna Xildhibaankan uu ahaa Kabtankii Tartanka gobolada ku matalayay maamulka Hiiraan iyo Shabeelaha Dhaxe.
Baarlamaanka cusub ee maamulka Hirshabelle ayaa u badan dad ku dhashay kana soo jeeda labada gobol ee maamulka loo sameeyay, Baarlamaanka ayaana waxaa ka dhax muuqda dhalinyaro wax bartay saameyna ku leh gobolada ay matalaan.